Imaaraadka iyo Israel oo maalinta birrito ah heshiiska xirirkooda ku saxiixi doono Aqalka cad. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Imaaraadka iyo Israel oo maalinta birrito ah heshiiska xirirkooda ku saxiixi doono...
Imaaraadka iyo Israel oo maalinta birrito ah heshiiska xirirkooda ku saxiixi doono Aqalka cad.
Wufuud ka kala socta Israel iyo UAE ayaa gaaray caasimada Maraykanka ee Washington, si ay u meel mariyaan heshiiski ay dhawaan wada gareen, xafladda saxiixa heshiiskaasi ayaa dhici doonta maalinta Talaadada ah ee soo socota sida la qorsheeyay.
Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa horay u sheegay in heshiiskan ay la saxiixanayaan Imaaraadka iyo Baxreyn uu ka dhci doona Washington, dhankoodana ay kaga bixi doonto dhaqaala badan.
Netanyahu ayaa arrintaa ka hadlay inta uusan raacin dayaaraddii ka qadeeysay Telabiib kuna sii jeeday Washington, si uu uga qaybgalo xafladda saxiixa heshiiskii ay kal hore la galeen Imaaraadka iyo Baxreyn, ee uu garwadeen ka ahaa Mareykanka.
Wakaaladda wararka Imaraadka ee (WAM) ayaa sheegtay in Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Imaraadka Abdullah bin Zaayid Al Nahyan, uu gaaray caasimadda Mareykanka isaga oo horkacaya wafdi rasmi ah oo ay ku jiraan saraakiil sar-sare, si ay uga qeybqaataan saxiixa heshiiska diblomaasiyadeed ee lala galay Israa’iil.
Waddamo ay ka mid yahiin France iyo UK ayaa soo dhaweyay heshiiskan, sidoo kale gudiga fulinta ee midowga Yurub oo soo dhaweeyay heshiiskan sheegayna in dhaqangalka heshiiskan uu muhiim u yahay xasiloonida gobolka.
Dhanka kale, Ururka Culimada Muslimiinta ayaa cambaareeyay heshiiska dhexmaray Baxreyn iyo Imaaraadka iyo Israel.
Xoghayaha Guud ee Xiriirka Culimada Islaamka Dr. Cali Al-Qaradaaci ayaa carrabka ku adkeeyay in aarinkan uu daba socda qabsashada Qudus ee ay ka aamuseen Muslimiinta Caalamka, iyo in waddamad Carabta ay dhagaha ka fureysteen dulaanka har iyo habeen lagu hayo shacabka Falastiin.
Hadalladan ayaa yimid kadib markii Baxrayn ay ku dhawaaqday Jimcihii inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa ay la yeelaneeyso Israel, si ay ula mid noqoto Imaaraadka Carabta oo hore tallaabo tan la mid ugu dhawaaqay 13-kii bishii August ee sanadkan.
Previous articleTaliska Booliiska Dhuusamareeb oo ka war bixiyay Nin lagu dhaawacay magaaladaasi.
Next articleWasiirka Maaliyadda Galmudug oo xariga ka jaray xafiis ka shaqeynaya uruurinta canshuuraha [sawirro]